Meth Oliver Translated by kaManzi, Faith (2008) Ukwahlukaniswa ngobuzwe kusaqhubeka kakhulu kwezemfundo.
. Eye on Civil Society : -.
Ihunyushwe nguFaith kaManzi
Isimo sezemfundo eNijngizimu Afrika sesingene ngaphansi kwezinguquko eziningi kusukela ngonyaka ka1994. Ngaphandle nje koshintsho olwenziwa kumthethosisekelo, imizamo iyenziwa ukuthi kulethwe isimo esizokwenza umehluko uma sekubhekwene nesimo esasidalwe ubandlululo kodwa isimo esizodala ukwamukelwa umhlaba wonke. Okubalulekile kulesisimo “ukuhlonishwa kobuntu, ukuqhakambisa ukulingana kanye nokuhambisa phambili amalungelo abantu nenkululeko…” (Section 1 (a) of the Constitution, 1996). Umthethosisekelo ugcizelela lokuzinikela ekulinganeni kwabantu kanye nokuhlonipha ubuntu ngokwebala kanye nangobulili. Lokhu kubuye kwenziwa kabanzi kuMqulu wamaLungelo.
Ngaphandle kokushintsha kwesimo sezombusazwe okwenzeka eNingizimu Afrika ngonyaka ka1994, kusenemisalela ekubhekenwe nayo mayelana nesimo sempilo kanye nezomnotho. Ukusebenzisa imfundo njengesiboniso, noma kunemigomo embalwa esibekiwe kanye nemithetho eshayiwe ukwehlisa ukucwasana ngobuzwe, ingozi yobandlululo ezikhungweni zemfundo eziningi ifakazisa inkani ngokuqhubeka kokubandlulula ngezemfundo. Eminyakeni embalwa edlule, sekube nezihlokwana zodlame ebezigqmile kakhulu ukukhombisa lokhu.
Lokhu kwenziwa izithombe kanye nezinkomba eziboniswa emaholo amahovisi; kuhambisana nokuthi kugcweleni lapho kugcinwa khona izincwadi, kuya ngokuthi ngobani abahlonishwa ngamajazi (futhi ngoba abangawatholi); kuya ngokuthi iliphi ibala eligcwala kwimizimba elawula izikole, obani abanikwa izikhala zokubheka abafundi lapho bebhalela ukuhlolwa; futhi ngobani abahlonishwayo lapho abafundi behlangene esikoleni ekuseni, obani abangabalwa; kuyangokuthi ngebala lobani labaculela ikwaya lesikole, obani okuqhutshekwa behlala bevuselelwa izinkontilaki zabo, obani abacwaswayo; ulimi lobani oluhlale lukhulunywa emihlanganweni, elobani elingakhulunywa, imiphi imidlalo ekufanele idlalwe esikoleni, iyiphi (ngesimo esingaqondakali) engavunyelwa; kuya ngokuthi ibuphi ubungani emiphakathini othisha nabaholi bezikole ababuvumelayo, lokhu okubukwa ngabafundi; kuya ngokuthi iliphi ibala elisebenza emahovisini okuphatha izikole kanye nokuthi iliphi elihlanza amachibi esikole okubhukuda; indlela abesifazane ababukwa ngayo ebudlelwaneni babo emagcekeni ezikole kanye nasezikhungweni zemfundo ephakeme, obani abahlala ndawonye lapho kuphumula khona abafundisi, obani abahlala engxenye; obani ababizwa ngokuthi “Mnumzane” futhi ngobani, okunganakwa nokuthi ithini iminyaka yabo abavele babizwe ngokuthi “Sipho”; kuyangokuthi yini uphawu lwesikole noma lesikhungo semfundo ephakeme; imaphi amaculo aculwayo, idlela yokukhuluma nabanye; nokuthi kukhulunywa kanjani ngekusasa lesikole noma ngesikhungo semfundo ephakeme.
Uma sesibhekene nephuzu lokugcina, izinkulumo ngekusasa lezikhungo zemfundo zingaba nemithelela elimazayo ngezamasiko esikhungo kanye nokubhekana nentando yeningi. Ngike ngavakashela umhlangano owawusesikoleni samabanga aphezulu eWentworth, ngamangala kakhulu, lapho umfundi ecelwa ukuthi azofunda iBhayibheli futhi avule ngomthandazo. Wafunda isahluko ngokwehlulwa kwiSililo (igama lisho konke) futhi wancenga uNkulunkulu ukuthi asibhekelele ngosizi nobuhlungu imfundo ebhekene nabo. Ukwenza izindlela ezikhombisa ukwehlulwa kanye nezinkulumo ezingenathemba zikhombisa ukuthi imfundo ezikoleni kanye nasemakilasini ibonakala sengathi ingasizwa ithemba kuphela.
Lokhu kukhombisa abafundi abamnyama ukuthi lesisikole ngesobani. Izimpawu zibalulekile, njengoba umfundo washo ngoba zichaza ukushintsha kwesikhungo noma isikole.
Inselele ebhekene nezikhungo zaseNingizimu Afrika ukuthi ngabe ziyakwazi yini ukugona amanye amasiko kuze kufike lapho abafundi abamnyama nabamhlophe “bengakwazi ukuzizwa besekhaya” ngaphakathi kwezikhungo.
Kodwa ngabe ubuwula ukunganaki ukuthi izimo ezinjengalezi zamandla zibuye zihambisane nokuthi kwenzekalani emiphakathini. Emindenini, kwezemidlalo kanye nabezohwebo, ukubaluleka kokucabanga ngokubandlulula ngebala kuseyimpilo yansuku zonke. Lokhu kuvimba kakhulu ukuxazululwa amanga ngokubaluleka kobuzwe okugxile ngokulethwa ezikoleni. Zonke lezizinto zokwenza sengathi ubandlululo alusekho ziyaqhubeka nokugcizelelwa ezikoleni
Ubuzwe, ubandlululo, ukucwasa kuyaqhubeka ngenxa yamagama akhulunywayo emhlabeni wonke.